एउटी आमाको यो कारुणिक दृश्य : मृत्यु भएकी छोरीलाई काखमा राखेर …. – Nep Stok
फागुण ३०, २०७८ सोमबार 240
सुन्दरहरैचा नगरपालिका–७ की १८ महिनाकी बालिका कर णी गरी ह’ ‘त्या गरेको अभियोगमा दुई जनालाई प्रहरीले प्रक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा निज अवोध बालिकालाई यहीँ फागुन २७ गते कर णी ग’री ज्यान लिएको आरोपमा सोही नगरपालिका बस्ने २८ वर्षीय मिथुन चौधरी र २५ वर्षीय अजय चौधरी रहेका छन् ।
निजले बालिकालाई फागुन २७ गते मोरङको बेलवारी–८ बाट खेल्दै गरेको अवस्थामा ‘चोकोफन चकलेट’ दिई ल’ला’इफ’का’इ गरी पी’डितको घरबाट १५० मिटर उत्तर पश्चिम दि’शाको वयरघारीमा कर णी ग’री वि’य’रको बो’त’ल तथा ढु’ ‘ङ्गा प्र’हा’र ग’री ज्या’ ‘न लि’ए’को कार्यालयका प्रमुख एवं प्रहरी उपरीक्षक जनार्दन जिसीले बताए ।
अभियुक्तलाई प्रहरीले शा’री’रि’क र प्रा’वि’धिक अनुसन्धानबाट घटना भएको १२ घण्टामा पक्राउ गरेको उपरीक्षक जिसीले जानकारी दिए । उनीहरूलाई श्चात एक पसलमा मा’प’से गरी मामा घरमा गएर बसिरहेको अवस्थामा पक्राउ गरेको प्रहरीले जनाएको छ । आरोपी अजय चौधरी दुई वर्ष अगाडि दुई वर्षीया बालिकाको अ’प’ह’र’ण मुद्दामा कारागार चलान भई गएको मङ्सिर १८ गते अदालतको फैसलाबाट रिहा भएका थिए ।
बालिकाको शव वि’भ’त्स अवस्थामा फेला परेको उपरीक्षक जिसीले बताए । अभियुक्तलाई पुर्पक्षका लागि पाँच दिन अदालतबाट म्याद थप गरिएको छ भने घटनाको आरोपमा आजीवन कारावासको माग गरिएको प्रहरीले जनाएको छ ।
करिश्माको अन्तिम संस्कारमा उनका परिवार भ’क्कानिए । घटना देखिरहेका सबैका आखा रसाए । ‘बिचरी त्यति सानी बच्चीमाथि त्यस्तो घटना भयोे,’ स्थानीय विश्व निरौला भन्छन्, ‘उनका बाबुआमाले अनेक सङ्घर्ष गरेका थिए । यो घटनाले हामी सबैलाई त्रासदी दिएको छ ।’
अहिलेसम्म आमाको होस खुलेको छैन । राजकुमारका छोरा केही समययता बिरामी छन्, दुई छोरीमध्ये एक जना शा’री’रि’क अ’पाङ्ग’ता भएकी छन् । उनी बोल्न–सुन्न सक्दिनन । काममा नगएपछि राजकुमारलाई आफूसहित पाँच जनाको जीविको धान्न धौ–धौ भएको छ । गाउँका केही महिलाहरूको समूहले चन्दा उठाएर उनलाई सहयोग गरिरहेका छन् ।
Prevएउटी आमाको यो कारुणिक दृश्य : मृत्यु भएकी छोरीलाई काखमा राखेर …
Nextकार दुर्घटनामा चर्चित अभिनेत्रीको घटनास्थलमै मृत्यु
कठै ! आफ्नै साथीलाई बचाँउदा नेपाली युवालाई फाँ सी,छोराछोरी र श्रीमतीको बे हाल (भिडियो हेर्नुस्)
आज सुनको भाउले तोड्यो अर्को ऐतिहांसिक रेकर्ड, तोलाको कति ?
परिवार संगै चन्दागिरीमा हिँउ खेल्न गएका दिपक सधैको लागि अस्ताए, ७ दिनपछि भीरमा अड्किएको अवस्थामा शव फेला